Home Wararka Cumar Abdirashiid oo ka horyimid go’aankii Galaha Wadatashiga Qaran
Cumar Abdirashiid oo ka horyimid go’aankii Galaha Wadatashiga Qaran
Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharma’arke ayaa ka horymid warmurtiyeedka kasoo baxay shirkii Golaha Wadatashiga qaranka ee lagu jaangooyay habraaca doorashada Golaha Shacabka BFS ayaa ku tilmaamay go’aan kicin kara rabshado cusub.
Cumar Cabdirashid waxa uu hoggaamiyaasha Gobolladu ku sifeeyay in ay ku guuleysteen xoojinta awoodda ay ku leeyihin Doorashooyinka marka la eego kaalinta ay ku leeyihiin soo xulista Odoyaasha & galaangalka Ergada wax dooraneysa.
Cumar Cabdirashiid waxa uu ku baaqay in dib u eegis degedeg ah lagu sameeyo si looga fogaado dib u dhac ku yimaado xasilooni u socodka Doorashada kuraasta Golaha Shacabka BFS oo loolan ay u galayaan Musharixiinta u tartameysa.
“Hoggaamiyaasha Gobolladu waxa ay ku guuleysteen in ay maamulaan doorashooyinka Aqalka Hoose (Golaha Shacabka), warmurtiyeedka waxaa ka harsan hufnaanta geedi socodka oo aanay helin taageerada Dadka Soomaaliyeed, waxaa suuragal ah in uu kiciyo dareen cusub & rabsho, waa in degdeg loogu laabtaa” ayuu yiri Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid.
Habraaca Doorshada ee Golaha Shacabk BFS ayaa dhaliyay kala aragti duwanaan, mas’uuliyiin & siyaasiyiin xilal kala duwan dalka kasoo qabtay ayaa isku khilaafsan taageeridda, dadka diidan ayaa u arka in awood dheeraad ah lagu siiyay Madaxda Dowlad-Goboleedyada.